Yakachipa Groove Type Kompositi Turner Machine Yekuisa Composting Organic Waste uye Zvipfuwo Mufudze Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Groove Type Composting Turner Machine?
Chii chinonzi Groove Type Compost Turner inoshandiswa?
(1) Groove mhando composting Turner inoshandiswa pakuvirisa tsvina yemombe yakadai semombe uye manyowa ehuku, sludge dumpling, shuga chirimwa firita matope, marara keke chikafu uye mashanga sawdust.
(2) Tendeuka umutse zvinhu mutangi rekuvirisa uye dzokera kumashure kuti utambe mhedzisiro yekutsanya kutendeuka uye kunyange inomutsa, kuti uwane kuzara kuzere pakati pezvinhu nemhepo, kuti iko kuvirisa mhedzisiro yezvinhu zviri nani.
(3) Groove mhando composting Turner ndiyo midziyo yepakati yeaerobic inosimudzira manyowa. Icho chiri chikuru chigadzirwa chinokanganisa kusimudzira maitiro eiyo indasitiri indasitiri.
Kukosha kwe Groove mhando composting Turner kubva pabasa rayo mukugadzira manyowa:
1. Kusanganisa kushanda kwezvinhu zvakasiyana
Mukugadzirwa kwefetiraiza, zvimwe zvekubatsira zvinhu zvinofanirwa kuwedzerwa kugadzirisa iyo carbon-nitrogen ratio, pH uye zvemvura zvemukati zvigadzirwa. Huru mbishi zvigadzirwa uye zvishongedzo izvo zvakaomarara zvakarongedzwa pamwechete, chinangwa cheyunifomu kusanganisa kwezvinhu zvakasiyana zvinogona kuwanikwa panguva yekutendeuka.
2. Sanganisa tembiricha yemurwi wezvinhu zvisina kugadzirwa.
Mhepo yakachena yakawanda inogona kuunzwa uye kubatika zvakazara nezvinhu zvakasanganiswa mumurwi wekusanganisa, izvo zvinogona kubatsira maaerobic microorganisms kuti anyatsogadzira kupisa kwekuvirisa uye kuwedzera kupisa kwemurwi, uye tembiricha yemurwi inogona kutonhorera nekuramba uchizadza patsva mhepo. Saka izvo zvinoumba mamiriro ekuchinjika kwepakati-tembiricha-tembiricha-tembiricha, uye akasiyana anobatsira microbial mabhakitiriya anokura uye kubereka nekukurumidza munguva yekushisa.
3. Kuvandudza kukwana kwemidziyo mbishi.
Iyo groove mhando composting Turner inogona kugadzirisa zvinyorwa kuita zvidimbu zvidiki, ichiita kuti dutu racho rive gobvu uye rakabatana, rakapfava uye rakasununguka, ichiumba porosity yakakodzera pakati pezvinhu.
4. Chinja hunyoro hwemurwi wezvinhu zvisina kugadzirwa.
Iyo yakakodzera hunyoro zvemukati mbichana zvinhu zvekuvirisa ingangoita 55%. Mukuvirisa kwekushandurwa kwekushanda, iko kushanduka kwehunyanzvi hwekuita kwemaerobic microorganisms kunounza hunyoro nyowani, uye kushandiswa kwezvinhu zvakasvibirira nemaoksijeni anodya mweya zvinoitawo kuti mvura irasikirwe nemutakuri uye kusununguka kubuda. Naizvozvo, nemabatiro ehurongwa, mvura ichaderedzwa nenguva. Kunze kwekusimuka kwemvura kunoitwa nekupisa conduction, izvo zvinoshanduka mbishi zvigadzirwa zvinoumba zvinomanikidzwa mweya wemhepo kubuda.
Zvakanakira Groove Rudzi Composting Turner Machine
(1) Iyo yekuvirisa tangi inogona kuburitswa zvichiramba kana muhuwandu.
(2) Kunyatsoshanda, kushanda zvakanaka, kusimba uye kusimba.
Groove Rudzi Composting Turner Machine Vhidhiyo Ratidziro
Groove Rudzi Composting Turner Model Sarudzo
Famba Kumhanya （m / min）
Unyanzvi (m3 / h)
Pashure: ChiChinese Wholesale Fermentation Kompositi Midziyo - Yega-inofambiswa Yayo Composting Turner Machine - YiZheng
Zvadaro: Chain ndiro Kompositi Kutendeuka